बुद्ध जन्मथलो र भ्रामक प्रचार « Lumbini-Kapilvastu Day Blog
« लुम्बिनी विकासबारे चीनमा सम्झौता
What happened to the dream ofaBuddhist Mecca? »
बुद्ध जन्मथलो र भ्रामक प्रचार
Posted by rajshrestha2002 on July 19, 2011
सन् २०१० को मध्यतिर दक्षिणपूर्वी एसियाली राष्ट्र लाओस पुगेको थिएँ । बौद्ध धर्मावलम्बीहरूको बाहुल्य रहेको लाओसको राजधानी भियन्टाइन सहर सुनौला बुद्ध मूर्ति तथा मन्दिरहरूले झकिझकाउ थियो । २५ सय वर्षअघि आˆनो देशमा जन्मेका बुद्धको ज्ञानको ज्योति लाओसमा प्रज्वलित भइरहेको देख्दा म कम्ती फुरुङ्ग भइन । ती सबै दृश्य देख्दा लाओसका जनता बुद्ध जन्मथलोबारे राम्रै जानकार होलान् भन्ने लाग्यो । जब मैले केही स्थानीयहरूसँग बुद्ध जन्मेको देशबाट आएको भनी परिचयका हात के अघि बढाएको थिएँ उनीहरूबाट ए इन्डियाबाट भन्ने जवाफ पाएँ । इन्डिया होइन नेपालबाट भनेपछि, होइन बुद्ध त भारतमा जन्मेका होइनन् र भन्दै उनीहरूले प्रतिप्रश्न गरे । बुद्धको जन्मस्थल नेपालको लुम्बिनीमा पर्छ कसरी भारत भयो भनी सोध्दा भारतीय दूतावासले आयोजना गरेको सांस्कृतिक कार्यक्रममार्फत बुद्ध भारतमा जन्मेको थाहा पाएको उनीहरूले बताए ।
यसरी भारतले बुद्ध जन्मभूमिबारे अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा जताततै भ्रमको खेती गर्दै आएको छ । चीनको राजधानी बेइजिङमा भारतले पछिल्लोपटक बोधगयालाई ‘अन्तर्राष्ट्रिय बुद्ध केन्द्र’ बनाउने नाममा पुनः बुद्ध जन्मथलो बारे भ्रम सिर्जना गरेको छ । खासगरी बेलायती अनुसन्धानकर्ताहरूले लुम्बिनीको विस्तृत वैज्ञानिक अनुसन्धान गर्ने र चिनियाँ गैरसरकारी संस्थाले मुस्लिमहरूको मक्का-मदिना तथा क्रिस्चियनहरूको जेरुसेलमझैँ लुम्बिनीलाई खर्बौँ रुपियाँको लगानीमा बौद्ध धर्मावलम्बीहरूको पवित्र तीर्थस्थलका रूपमा विकास गर्ने समाचार आएलगत्तै भारत अत्तालिन पुगेको हो । चीनलगायत बुद्ध धर्मावलम्बी देशहरूका धार्मिक पर्यटकहरू तान्न तथा बुद्ध भारतमा जन्मेको झुटो दाबीलाई संस्थागत गर्न उसले नयाँ अभियान थालेको हो । विगतमा पनि भारतले बुद्ध भारतमा जन्मेको झुटलाई पुष्टि गर्न के मात्रै गरेन । लुम्बिनीपारि इँटा थुपारेर नक्कली कपिलवस्तु खडा गरेन कि, शुद्धोदनको दरबार पिपरहवामा अनि बुद्धको मावली रामग्राम-देवदह नभई भारतको महाराजगञ्ज हो भनेन कि ? तर ऐतिहासिक-पुरातात्विक प्रमाण विनाको नक्कली कपिलवस्तुलाई हावादारी प्रमाणित हुन खान धेरै दिन लागेन । त्यसपछि भारतले अजितकुमार त्रिपाठी तथा चन्द्रमान पटेलजस्ता कथित भारतीय इतिहासकारहरूलाई अघि सार्दै गौतम बुद्धको जन्मथलो उडिसाको भुवनेश्वरनजिक कपिलेश्वर भएको कुतर्क अघि सार्‍यो । उडन्ते कथाझैं रचिएको उडिसाको ‘तथाकथित कपिलवस्तु’ को प्रचारबाजी पनि धेरै दिन टिकेन । र पनि बुद्धको जन्मथलो बारे भारतीय कुप्रचार अझै जारी छ । यसका लागि उसले विभिन्न तरिका अपनाउँदै आएको छ । कतिसम्म भने सन् २००९ को सुरुतिर ‘चाँदनी चोक टु चाइना’ नामक हिन्दी चलचित्रमा समेत बुद्ध भारतमा जन्मिएको विवादास्पद संवाद भारतीय सेन्सर बोर्डले स्वीकृत गर्‍यो । भारतीय मन्त्री, राष्ट्र्रपति तथा साधुसन्तले समेत बेलाबखत बुद्ध भारतमा जन्मेको अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन् । गत जेठमा मात्रै भारतीय योगगुरु रामदेवले भ्रष्टाचारविरोधी आन्दोलनका क्रममा बुद्ध भारतमा जन्मेको खुला अभिव्यक्ति दिए । रामदेवको उक्त भनाइको अहिलेसम्म कतैबाट खण्डन भएको छैन ।
हुनत केही मात्रामा हामी पनि दोषी छौँ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको एमएको अङ्ग्रेजीको पाठ्यक्रममै दुईवर्ष अघिसम्म बुद्धको जन्मथलो भारतमा हो भनेर पठनपाठन भइरहेको थियो । यसमा पनि भारत नै दोषी थियो त ? त्यसैगरी बुद्ध जन्मथलो भारतको उडिसा हो भन्ने समाचार भारतीय लगानीमा नेपालबाट प्रकाशन हुने एक दैनिकले छापेपछि जनस्तरमा त्यस्को चर्को विरोध भएको थियो । पछि उक्त समाचारको समर्थनमा २०५९ भदौ १९ को कान्तिपुर दैनिकमा वामपन्थी नेता मोहनविक्रम सिंहको लेख नै छापिएको थियो ।
थुप्रै ऐतिहासिक, पुरातात्विक प्रमाणहरूले बुद्धजन्मथलो नेपालको लुम्बिनीको कपिलवस्तुमा भएको कुरा निःसन्देह मात्र छैन उहिल्यै पुष्टि भइसकेको छ । बुद्ध जन्मथलो बारे थुप्रै तथ्य बुद्धले आˆनो जीवनको पूवार्द्धका २९ वर्ष बिताएको तिलौराकोट दरबारको भग्नावशेषको गर्भमा अझै छन् । भारतीय मौर्य सम्राट अशोकले ई.पू. २४९ मा लुम्बिनी यात्राको क्रममा स्थापना गरेको ‘स्तम्भ’ र ‘मार्कट स्टोन’ अझै जस्ताको त्यस्तै छन् । सन् १८९६ मा पुरातत्वविद खड्गसम्शेर राणाको अनुसन्धान टोलीले ‘अशोक स्तम्भ’ पत्ता लगाएको थियो । राणाको उक्त टोलीमा बेलायतका प्रसिद्ध पुरातत्वविद डा. फुहरर समेत संलग्न थिए । ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक महत्वलाई दृष्टिगत गर्दै युनेस्कोले समेत सन् १९९७ मा लुम्बिनी बुद्ध जन्मभूमिका रूपमा विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गरेको छ । सन् १९६७ मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय तत्कालीन महासचिव ऊथान्त हुँदै पछिल्लोपटक राष्ट्रसङ्घीय वर्तमान महासचिव बान की मुनदेखि भुटानी रानी तथा श्रीलङ्काली राष्ट्रपति महिन्द्रा राजापाक्षेसम्मले बुद्ध जन्मभूमि लुम्बिनीको भ्रमण गरेका छन् ।
सबै कुरा हुँदा पनि पछि पर्नु नेपाली जनताको नियति बनेको छ । सर्वोच्च शिखर सगरमाथा, बुद्धको जन्मथलो लुम्बिनी, नदीनाला, विशाल हिमालय पर्वत के छैन हामीसँग ? बुद्ध हाम्रो देशमा जन्मेका छन् तर बुद्धको नाममा भारतले व्यापार गरिरहेको छ । हामी भने शान्तिका अग्रदूत बुद्धको देशका नागरिक भएर पनि आˆनो परिचय बेलायत तथा भारतको बन्दुक बोक्ने ‘कथित बहादुर’ का रूपमा दिइरहेका छौँ । अरू देशले कूटनीति, बौद्धिकता, विद्वत्ता तथा ज्ञानलाई आˆनो चिनारी बनाइरहेको परिवेशमा हाम्रो चिनारी पाखुरा सुर्कने बहादुरमै सीमित छ । कवि भूपि शेरचनको ‘बुद्धु छौँ र न बहादुर छौँ’ भन्ने उक्तिसम्म हामीले आत्मसात् गर्नसकेका छैनौँ । त्यसैले अझै बुद्ध होइन खुकुरीको प्रचारमा छौँ ।
बुद्धको जन्मथलो बारे भइरहेको कुप्रचार एवम् भ्रमलाई चिर्न तत्काल अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मै त्यसको कडारूपमा प्रतिवाद हुनु जरुरी छ । लुम्बिनी विकास गुरुयोजना पूर्णतः कार्यान्वयनमा ल्याई विदेशस्थित नेपाली दूतावासमार्फत लुम्बिनीको प्रचार-प्रसार नियमित गरिनुपर्दछ । लुम्बिनीलाई धार्मिक पर्यटकीय नगरीका रूपमा विकास गरिनुपर्दछ । लुम्बिनीमा भइरहेको मानवीय अतिक्रमण रोक्दै त्यहाँ सुविधासम्पन्न पाँचतारे होटेल, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललगायतका पूर्वाधार निर्माणको खाँचो छ । धार्मिक पयर्टन विस्तारका लागि सरकारले बौद्ध धर्मावलम्बीको बाहुल्य रहेका चीन, मङ्गोलिया, जापान, कोरिया, लाओस, भियतनाम, कम्बोडिया, थाइल्यान्ड, बर्मा, भुटान, श्रीलङ्काजस्ता मुलुकमा प्रचार-प्रसार तीव्र पार्नुपर्दछ । हामीले लुम्बिनी विकासमा साँच्चिकै अग्रसरता देखाउन सके त्यसले एकातिर हाम्रो पर्यटन विकासमा सहयोग पुग्न गई रोजगारीका साथै राष्ट्रिय अन्र्थतन्त्रमा टेवा पुग्नेछ भने अर्कोतिर बुद्धको देशका रूपमा नेपालको चिनारी अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा फैलनेछ ।
Source : http://www.gorkhapatra.org.np/gopa.detail.php?article_id=53531&cat_id=18
This entry was posted on July 19, 2011 at 6:03 am	and is filed under Uncategorized. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.